စိန်ခေါ်မှုများရှိသော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံ က ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားကောင်းစေရန် လုပ်ဆောင် - Xinhua News Agency
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်နှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးသည် နာလန်ထူရန်ခဲယဉ်းနေသည့်အပြင် ရုရှား-ယူကရိန်းပဋိပက္ခကလည်းအခြေအနေကို ပိုမိုခက်ခဲစေခဲ့သည်။ ထိုအခြေအနေတွင် တရုတ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အားကောင်းစေရန် လုပ်ဆောင်နိုင်မည့်အခြေအနေရှိ၊ မရှိကို ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသည့်ရုပ်သံဖိုင်ဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘာ့ ဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည့် တရုတ်နိုင်ငံသည် စိန်ခေါ်မှုများစွာကို ရင်ဆိုင်နေရပြီး ထိုအထဲတွင် COVID-19 တစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာတွင်မသေချာမရေရာမှုများဖြစ်ပေါ်နေခြင်းနှင့် ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးဝါဒ နှင့် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းပျက်ပြားရေးလုပ်ဆောင်မှုများ မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် ဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ရင်ဆိုင်နေရခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
သို့ရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် လက်ရှိအကျပ်အတည်းကိုကျော်လွှားနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ ခိုင်မာတောင့်တင်းသည့် စီးပွားရေးအခြေအနေနှင့် အားကောင်းသော မိုက်ခရိုစီးပွားရေးမူဝါဒများဖြင့် ကမ္ဘာကြီးပြန်လည်နာလန်ထူစေရန် ပိုမိုသေချာရေရာမှုရှိစေမည့်ကိစ္စများကို ပေါင်းစည်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူများကဆိုသည်။
ကင်ညာအခြေစိုက် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ပညာတော်သင်ဆုရကျောင်းသား CAVINCE ADHERE
တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရက စီးပွားရေးနဲ့ ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်တွေကို ဟန်ချက်ညီမျှစေဖို့ သိပ်ပြီး ဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်ခဲ့ပါတယ်၊ အစိုးရအနေနဲ့ သိပ်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်မူဝါဒတွေချမှတ်ရာမှာ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု နှေးကွေးမှုမရှိရလေအောင် စဉ်ဆက်မပြတ်အထောက်အပံ့များ ကို ပံ့ပိုးပေးပြီး တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကျဆင်းမသွားစေရေး‌ စီမံထားတာလည်းပါဝင်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးဟာ ဆက်ပြီးတော့လည်းတောင့်တင်းခိုင်မာလာမှာဖြစ်ပြီး ရုရှား-ယူကရိန်း ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုကြောင့် ကြုံရတဲ့ ပဋိပက္ခအလွန် စီးပွားရေး စိန်ခေါ်မှု အပါအဝင် COVID-19 ကနေ ပြန်လည်နာလန်ထူမှု၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ကောင်းမွန်မှုနဲ့ တည်ငြိမ်မှု အတွက်တရုတ်နိုင်ငံက အဓိကပံ့ပိုးသူဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုသည် ပထမ သုံးလပတ်တာကာလ၌ပင် ယမန်နှစ်ကထက် ၄.၈ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လျက်ရှိပြီး ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းမှာလည်း ယနေ့ကာလအထိ အသင့်အတင့်အနေအထားတွင် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ဥဇဘက်နိုင်ငံမှကျွမ်းကျင်သူ TULANBAY KURBANOV က “တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးက ဒီနှစ်ရဲ့ ပထမသုံးလပတ်ကာလမှာ ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာကြားမှ မျှော်လင့်ထားတာထက်ကျော်လွန်ခဲ့ပါတယ်၊ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ ကပ်ရောဂါတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်နေရင်းနဲ့ပဲ တရုတ်နိုင်ငံဟာ ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရာမှာ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီး ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုပြန်လည်စတင်နိုင်ခဲ့ကာ စီးပွားရေးကိုလည်း အပျက်သဘောကနေ အပြုသဘောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုပြောင်းလဲဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ဘက်စုံပါဝင်သော ဘဏ္ဍာရေးမူဝါဒများအား အခွန်အခများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအား လျှော့ချရန်ကျင့်သုံးနေခဲ့ပြီးစီးပွားရေးကဏ္ဍတွင် တည်ငြိမ်စေရန် အများပြည်သူအတွက် ဘတ်ဂျက်အသုံးစရိတ်နှင့် ငွေတိုက်စာချုပ် အာမခံချက်များအား လုပ်ဆောင်ပြီးပြည်သူများ၏ ဘဝ ကောင်းမွန်စေရန်ဆောင်ရွက်ပေးထားသည်။
ထို့အပြင် dual circulation strategy (ပြည်တွင်းဈေးကွက်အားမြှင့်တင်ကာ ပြည်ပဈေးကွက်သို့ထိုးဖောက်မည့်ဗျူဟာ) ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရန် နှင့် အရည်အသွေးမြင့်မားစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်သည့် အနေဖြင့် နိုင်ငံသည် ဧပြီလ အစောပိုင်းတွင် ညွှန်ကြားချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းဈေးကွက်ကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းဖြစ်စေရန် ထူထောင်ခဲ့သည်။
နိုင်ဂျီးရီးယား နိုင်ငံရှိ Center for China Studies မှ ဒါရိုက်တာ ဖြစ်သူ CHARLES ONUNAIJU က
“ပြည်တွင်းဈေးကွက်အုတ်မြစ်ကို အလွန်ခိုင်ခံ့အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အရေးပါတဲ့အခြေခံအချက်တွေကို ဒီလို ခိုင်မာမြဲမြံအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အဆိုးဝါးဆုံး ထိတ်လန့်မှုတွေ ဖြစ်မလာအောင်တားဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၌ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် နိုင်ငံ၏ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွင် ကြံ့ခိုင်မှုအပေါ် မြင့်မားစွာမျှော်လင့်နေခဲ့ကြသည်။
ပထမသုံးလပတ်အတွင်း တရုတ်ပြည်မကြီး၌ နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ အသားတင်အသုံးပြုမှုပမာဏ ၂၅.၆ ရာခိုင်နှုန်း ၊ ယွမ် ၃၇၉.၈၇ ဘီလီယံ ( အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၇.၅ ဘီလီယံ) အထိ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကျယ်ပြန့်လာခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ Standard Chartered ဘဏ်မှ Executive vice-chairman နှင့် CEOဖြစ်သူ JERRY ZHANG က
“ Standard Chartered အနေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အလားအလာတွေကို လေးနက်စွာမျှော်လင့်နေပါတယ် ၊ ကျွန်မတို့ အနေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကနေ ဆောင်ကြဉ်းလာမယ့်အခွင့်အရေးတွေရှိမယ်ဆိုတာအပြည့်အဝ ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်၊လာမယ့် ၃ နှစ်အတွင်း Standard Chartered ဟာ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း၃၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမှာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရဲ့ တံခါးဖွင့်စီးပွားရေးနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖောက်သည်တွေအနေနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့အလားအလာတွေရရှိစေဖို့ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
Stabilus (Zhejiang) Co., Ltd မှ Operation director ဖြစ်သူ NEO MA က
“ကပ်ရောဂါကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့လတွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးဟာ အနည်းငယ်ကျဆင်းပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ဟာ အနာဂတ်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်လို့ယုံကြည်မှုရှိနေတုန်းပါပဲ ၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာပေါ့ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ဗျူဟာမြောက် ပန်းတိုင်တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ လာမယ့်နှစ်တွေထဲမှာ အာရှတိုက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဗဟိုချက်ကိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲဖို့ပါပဲ၊ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ တရုတ်နိုင်ငံဟာ အာရှတိုက် စီးပွားရေး ရဲ့ ပင်မ ထောက်တိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ လာမယ့် ၇ နှစ် ၈ နှစ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးကို နှစ်ဆ ချဲ့ထွင်ဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
ဆင်ဟွာသတင်းထောက်များက ပေကျင်းမြို့မှသတင်းပေးပို့နေခြင်းဖြစ်သည်။ (Xinhua)
GLOBALink | China set to power world economic growth despite challenges
BEIJING, May6(Xinhua) — The world economy has barely recovered from the past two years of the COVID-19 pandemic, and the Russia-Ukraine conflict has further exasperated the situation. Can China continue driving global economic growth? Click to find the answer.